Home Wararka Qaar kamida ciidankii saaka lagu wareejiyay Guriceel oo bilaabay ficilo aargoosi ah
Qaar kamida ciidankii saaka lagu wareejiyay Guriceel oo bilaabay ficilo aargoosi ah
Sida ay MOL u xaqiijiyeen odoyaasha iyo ganacsatada ku dhaqan magaalada Guriceel
ciidankii saaka lagu wareejiyay Guriceel ayaa magaalada ka bilaabay ficilo aargoosi ah oo lagula kacay qaar kamida ganacsatada iyo shaqsiyaad gaar ah.
Ahlusunna looga adkaan waayay dagaalkii Guriceel, islamarkaana aan looga adkaan doonin dagaal dambe ayaa kaga baxay magaalada Guriceel si nabad ah ka dib wadahadal iyo dhex dhexaadin ay sameeyeen odoyaal.
Waxaa maanta lagu xirxiray magaalada Guriceel dhalinyaro lagu eedeyay in ay taageereen kacdoonka Ahlusunna Wajameeca. Ilaa hada lama oga tirada rasmiga ah ee la xiray. Dhanka kale dhalinyaro badan ayaa dhankooda ka cararay magaalada Guriceel.